“Salah ayaan kala cabsaday mustaqbalkeyga” – Sadio Mané – Gool FM
“Salah ayaan kala cabsaday mustaqbalkeyga” – Sadio Mané
Dajiye May 14, 2020
(Liverpool) 14 Maajo 2020. Xiddiga kooxda kubadda cagta Liverpool ee Sadio Mané ayaa wuxuu shaaca ka qaaday cabsida uu ka qabay laacibka reer Masar ee Mohamed Salah markii uu Reds kaga soo biiray naadiga AS Roma.
Mohamed Salah wuxuu u dhaqaaqay Liverpool xagaagii 2017, xilligaas uu laacinbka reer Brazil ee Philippe Coutinho uu xiddiga koowaad ka ahaa garoonka Anfield.
Sadio Mané ayaa xilligaas weydiiyay Jurgen Klopp booska Salah, waxaana macalinka reer Germany uu carabka ku adkeeyay inuu si weyn u soo muuqan doono, balse wuxuu qariyay faahfaahinta gaarka ah ee la xiriirta suurtagalnimada ah bixitaanka Philippe Coutinho.
Mané ayaa wareysi uu ku bixiyay shabakada “Liverpool Echo” wuxuu yiri:
“Jurgen Klopp wuxuu ii sheegay inuu kalsooni igu qabo, waqti dheer ahna aan ciyaari doono ilaa iyo heer daal, si kastaba ha noqotee, waxaan u sheegay inaan doonayo inaan ciyaaro.”
“Klopp wuxuu sheegay inay tahay inuu maamulo kooxdiisa, sidoo kale waxaa jirtay xaqiiqada ah in Philippe Coutinho uu ku dhow yahay inuu baxo, laakiin ma dooneynin inuu si dhaqsi ah iigu sheego.”
Si kastaba ha noqotee, Sadio Mané ayaa wuxuu gacan weyn ka geystay in Liverpool ay ku guuleysato saddex koob, kuwaasoo kala ah, Champions League, UEFA Super Cup iyo Club World Cup.
“Waxaan cunaayay baakado” Mario Balotelli oo ka sheekeeyay duruuftii ku heysatay karaantiilka iyo inuusan cunno karsan karin
“Jadon Sancho waa sida Neymar Jr oo kale” – Xiddig hore ee kooxda Man United ah